एमाले महाधिवेशनमा ओलीले गरे जल, स्थल र अन्तरिक्षसम्मको चर्चा – KarnaliPost Daily
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार ११:१८ December 7, 2021 by Karnali Post Daily
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको दसौँ महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जल, स्थल र आकाशसम्मको चर्चा गरेका छन् । देश विकासका लागि एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गर्दै उनले जल, स्थल र आकाश गरी तीनै क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विकासको जग बसालेको दाबी गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले तुइन विस्थापित गर्नेदेखि लिएर भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचना पुनर्निर्माण गर्नेसम्मका काम आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको बताए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा देशको स्याटेलाइट पठाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भूपरिवेष्ठित मुलुकको रूपमा रहेको नेपाललाई भूजडित नेपालको अवस्थामा हामीले पुर्‍याएका छौँ ।’
आफूहरूले नेपालको विकास गर्ने मात्र नभनेर नेपालको अवधारणा नै परिवर्तन गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले भनेका छौँ समुन्द्र पनि हाम्रो हो । अन्तरिक्ष पनि हाम्रो हो । समुन्द्रमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ तर म साथीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु हामीले धर्तीको अर्विट छेडेर सानो भए पनि भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएका छौँ । त्यसमा सफलता पाएका छौँ ।’ अब ठूलो उपयुक्त साइजको भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने उनको भनाइ थियो ।
उनले जमिनमुनि तार बिछ्याएर ‘फोर जी’ सुरु गरिएको चर्चासमेत गरे । उनले समुन्द्रमा आफूले नेपालको हक छ भनेर पहिलो पटक दाबी गरेको पनि बताए । जलमार्गको बारेमा भारतसँग आफूले छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
ओलीले देशमा ढिलोचाँडो तीनै तहको निर्वाचन हुने भन्दै देशको स्वाधिनता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई बहुमत चाहिएको बताए । उनले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, संविधानको गलत व्याख्यालाई जनअभिमतबाट सच्याएर अघि बढ्नका लागि एमालेले बहुमत ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले दसौँ महाधिवेशनबाट पार्टीका केही नीति दुनियाँले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने खाँचो पनि औँल्याए । ‘हामी सामाजिक सद्भावको पक्षमा छौँ, सहअस्तित्व र सहकार्यको पक्षमा छौँ,’ उनले भने, ‘पारस्परिक एकताको पक्षमा छौँ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न चाहन्छौँ । विद्वेष, विरोधको राजनीति हाम्रो होइन । समझदारी सद्भाव एकताको नीति हो भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’
आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको चर्चा गर्दै उनले संविधानमै अङ्कित भइसकेको सो नक्साअनुसारको भूभाग फिर्ता लिन बाँकी नै रहेको पनि बताए । संवादका माध्यमबाट उक्त भूभाग फिर्ता ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
ओलीले आफूलाई अप्ठ्यारा पार्नेहरूले नै आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खुट्टा समातिरहेको चर्चा पनि गरे । ओलीले भने, ‘अहिलेको सकारबारे म केही भन्न चाहन्न । उहाँ (प्रधानमन्त्री देउवा)लाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चमा अतिथि बनाएर राखेर टिप्पणी गर्न वाञ्छनीय हुँदैन । प्रधानमन्त्रीज्यू सायद काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो कि ? तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न गाह्रो छ कि ? मलाई अप्ठेरो पार्ने, मेरो खुट्टा तान्नेहरूले आज उहाँका खुट्टा समातिरहेका छन् । त्यसकारण उहाँलाई पनि गाह्रो छ कि ?’ उनले हँसिया–हथौडा बोकेर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले वामपन्थी सरकार ढाल्दै दक्षिणपन्थी सरकार बनाएको भन्दै उनीहरूलाई हँसिया हथौडा फ्याँक्न सुझावसमेत दिए ।
पाँचदलीय गठबन्धनले हिँड्न खोजेको उल्टो बाटो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कर्णालीमा साताभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिन पहल गर्ने माओवादीको निर्णय न्यायलय दुषित पार्ने व्यक्तिलाई हटाउन हस्ताक्षर गर्छु ः सांसद महत कर्णालीमा एमाले जिल्ला अधिवेशन : ७ जिल्लामा नेतृत्व चयन, दैलेखमा विवाद हुँदा हुम्लामा स्थगित